The government is allocating start-up capital to startups, apply like this Tech News Nepal
१४४ हर्ज रिफ्रेश रेट भएको रेड्मी के थर्टी
मंगलवार, बैशाख ३०, २०७७ ११:३४
ड्रोन उडाउँदै हुनुहुन्छ ? थाहा पाइराख्नुहोस् सरकारको नियम
लाभाले ल्यायो थर्मोमिटरयुक्त पहिलो फोन, ब्याट्री पनि ६
अमेरिकी प्रतिबन्धका बाबजुद छलाङ मार्दै ह्वावे
स्टार्टअपलाई अनुदानमा सुरुवाती पूँजी बाँड्दै सरकार, यसरी दिनुहोस् आवेदन
काठमाडौं । सरकारले नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअपहरुलाई अनुदानको रुपमा सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार सूचना जारी गर्दै सुरुवाती पूँजी प्राप्त गर्न चाहने स्टार्टअप कम्पनीहरुसँग आवेदन माग गरेको हो ।
आयोगले नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजी अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ तथा नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजी अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार उक्त रकम उपलब्ध गराउने बताएको छ । जसअन्तर्गत सरकारले नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारकर्ता, उद्यमी, व्यावसायी तथा संस्थालाई त्यस्ता उद्यम एवम् व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पूँजीको रुपमा अनुदान उपलब्ध गराउने छ ।
त्यसका लागि कार्यविधि तथा मापदण्ड अनुसारको ढाँचामा प्रस्ताव तयारी आवश्यक कागजात सहित अनलाइनमार्फत दर्ता गर्न सकिने छ । यसका लागि ३० दिनको समय उपलब्ध गराइएको छ ।
कसरी दिने आवेदन
आवेदनका लागि यहाँ क्लिक गरी कार्यविधि र मापदण्ड डाउनलोड गर्न सक्नु हुनेछ । कार्यविधि र मापदण्डका आधारमा आवश्यक कागजपत्र तयार पारी यहाँ क्लिक गरी रजिस्ट्रेसन पृष्ठ दर्ता गरेर युजर नेम र पासवर्ड बनाउनु पर्नेछ । त्यति गर्नासाथ तपाईंको ईमेलमा युजर नेम र पासवर्ड एक्टिभ गर्नका लागि भेरिफिकेसनको रुपमा ईमेल आउनेछ ।
उक्त ईमेलमा क्लिक गरी तपाईंले युजर नेम र पासवर्ड एक्टिभ गर्न सक्नुहुनेछ । युजर नेम र पासवर्ड एक्टिभ भएसँगै यहाँ गएर तपाईंले लगईन गरी आवेदन फारम भरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ ।
काठमाडौं । सूचना प्रविधिको विकाससँगै पछिल्लो समय व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा मानवरहित हवाई उपकरण (ड्रोन)
फ्रिक्वेन्सी बापत सरकारले प्राप्त गर्‍यो पौने ४ अर्ब, कसले कति तिरे ?
काठमाडौं । रेडियो फ्रिक्वेन्सीबापत सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीन अर्ब ८७ करोड ६३
थाहा पाइराख्नुहोस्, नेपालको दूरसञ्चार सेवाको इतिहास
काठमाडौं । नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको सुरुवात बि. सं १९७० मा म्याग्नेटो प्रविधिको टेलिफोन सेवा सुरु
नेपालमा यस्ता रहे इन्टरनेटका पछिल्ला ५ वर्ष
काठमाडौं । आज हाम्रो दैनिकी इन्टरनेटसँग जोडिएको छ । हरेक कुरा इन्टरनेटमै निर्भर हुने अवस्था
एप्पलले पार गर्‍यो नयाँ कोशेढुंगा, आईफोन प्रयोगकर्ताको संख्या १ अर्ब नाघ्यो
इन्स्टाग्राममा अब ४ घण्टासम्म भिडियो स्ट्रिमिङ गर्न सकिने